UCanzibe 22, 2018 admin
yebhanki Argentina uba ngowokuqala ukusebenzisa Bitcoin okunye umthengi
Namhlanje Argentina kaThixo Banco Masventas, ngokubambisana ne Bitex Exchange, waba ibhanki wokuqala ukusebenzisa Bitcoin okunye real umthengi, ngqo iintlawulo cross-umda.
Kubonakala ukuba ibhanki zazingenela ehlabathini ukuvumela abathengi ukuba usebenzise Bitcoin njenge ukhetho intlawulo. Ngokutsho ebhankini, Ngoku abathengi Ungasebenzisa Bitex ukuthumela imali ngaphezu 50 kumazwe ahlukeneyo e ngaphantsi kwe 24 iiyure, ne imali ye 3% +VAT.
Poland Kumiswe isigqibo kubalwa iintengiselwano cryptocurrency
I-Ofisi yoMphathiswa wezeMali for Poland likhuphe ingxelo entsha malunga nemithetho irhafu lizwe.
Enkulu uyakholiswa abasebenzisi cryptocurrency Poland kaThixo, urhafiso on cryptocurrency sorhwebo uye waphakamisa okwethutyana njengoko abasemagunyeni baye baqaphela indlela imithetho irhafu ayisebenzi kwaye ezingenangqondo baba.
EyoMqungu 18, 2019